Maxay ka dhigan tahay in Madaxweynaha dalku uu dib u celiyo dal kale Baasaboorkiisa uu haystey? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Maxay ka dhigan tahay in Madaxweynaha dalku uu dib u celiyo dal kale Baasaboorkiisa uu haystey?
Maxay ka dhigan tahay in Madaxweynaha dalku uu dib u celiyo dal kale Baasaboorkiisa uu haystey?
August 1, 2019 - By: I. Haji Said
Farmaajo oo dib u celiyey baasboorkii maraykanka 30 bilood kadib oo uu madaxweyne yahay
Maanta oo ku beegan 1da Agoosto waxaa la shaaciyey in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka tanaasuliyey dhalashadii (naturalized) uu dalka Maraykanka ka qaaatey isla markaana dib u celiyey Baasaboorkii Maraykanka.
Sharciga dalka Maraykanka iyo weliba kan Soomaaliya waxay oggol yihiin in qofku laba dhalasho lahaan karo dalka uu u dhashey iyo midka uu dhalashadiisa qaatey, laakiin sabab ayaa jirta Madaxweyne Farmaajo ku kaliftey in uu ka tanaasulo dalkii uu dhalashadiisa qaatey
Marka hore warkan ah in Madaxweynhu ka tanaasuley baasaboorkii Maraykanka isaga oo xilka haya waa mid weyn, waa tallaabo wanaagsan, laakiin waxaa jira siyaasyiin badan oo caalamka si weyn looga yaqaan oo sidaan oo kale yeelay. ogow dalka Maraykanka baasaboorkiisa waad celin kartaa adiga oo maraya waddo loogu tala galay, laakiin markaad doonto ayaad dib u dalban kartaa.
Benjamin Natanyahu waxa uu haystey dhalasho dalka Maraykanka ah isaga oo Wasiir ah ayuu dib u celiyey, mar kale ayuu qaatey, waxa uu noqdey Raysalwasaare, mar kale ayuu haddana dib u celiyey, waxaana uu qaadan karaa oo dib u dalban karaa markasta oo uu doono, marka Madaxweyne Farmaajo waxa uu khalad ku sameeyey in isaga oo baasaboorkii kale haysta oo dalka sii xukumo laba sano ka badan, waxayna ahayd in uu dib u celiyo isla maalinta la dhaariyey.
Sababaha kalifi kara in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku ka tanaasulo in uu sii ahaado muwaadin Maraykan dhalashadiisa haysta isaga oo dalkiisi Madaxweyne ka ah ayaa waxaa jira warar horey u soo baxay oo sheegaya in Madaxweyne Farmaajo doonaayey in uu booqdo dalka Maraykanka, laakiin waxaa hor istaagey sharci qeexaya in aanu si maamuus leh loo soo dhaweyn karin inta uu haysto dhalashada Maraykanka, sidoo kale arrintan waxay ka hor istaagtey laba jeer in uu ka qaybgalo fadhiga loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey, oo la aaminsan yahay in sanadkan 2019 uu ka qayb galayo.
Waxaa jira dalal badan oo caalamka ah oo qof laba baasaboor leh uu Madaxweyne ka noqon karo waxaana kamid ah, France, Austeria, Azarbajan, Germany, Britian, Israel iyo Soomaaliya.
Kadib markii Soomaali ku heshiin weydey in ay dib u dhistaan Qaranimadoodi, si qiime iyo sharaf uu u yeesho baasaboorkoodu waxay haystaan baasaboorada dalal badan oo caalamka ah, inta dalka ku hartey badankoduna waxay haystaan baasaboorada dalalka deriska sida Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Uganda.
Khayre:Dhalinyaro Qalinkiina ku bedela sawirka qaldan ee dalkeenna horay looga bixiyay
August 23, 2019 By Omar Akhyaar
Muqdisho:Xafiiskii Booliiska Adduunka ee Interpol oo Dib Loo Furay 30 Sanno Ka Dib
Wasiir Cawad oo Addis- ababa uga qeybgalay shirka Wasiirada Arrimaha Dibadda ee IGAD